Osimiri Mekong gafere: Tibet, China, Burma, Thailand, Laos, Cambodia na Vietnam | Akụkọ Njem
Njem Asia | | Laos, Luang prabang, Asia njem
Heard nụla nke ọma osimiri mekong n'ọtụtụ fim. Osimiri a ma ama abụrụla ebe ọtụtụ agha na ịchụso, kamakwa njem ụgbọ mmiri dị iche iche na ụfọdụ n'ime ngalaba ụgbọ mmiri ya, tinyere ụzọ karịrị kilomita 4.000. Kemgbe amụrụ ya na ugwu Tingetan Quinghai, ọ gara ala China, Burma, Tailandia, Laos, Cambodia na Vietnam.
Osimiri Mekong bụ otu n'ime osimiri ndị kasị ukwuu n'ụwa, ma oke mgbanwe dị iche iche n'oge dị iche iche n'afọ, ịdị adị nke rapids na nsụda mmiri na-eme ka ịgagharị esiri ike. Ọkara njem ya bụ site na mpaghara ndị China, ebe a makwaara ya dị ka Osimiri Lancang ma ọ bụ Osimiri Turbulent. N'ịga n'ihu, Osimiri Mekong bụ ókè n'etiti Myanmar na Laos maka kilomita 200, na njedebe nke Osimiri Ruak zutere ụtụ ya. Nke a bụ kpomkwem nkewa n'etiti Upper na Lower Mekong. Mgbe ịsachara ala nke ọtụtụ mba wee metụta ndụ nke ihe karịrị nde mmadụ 90, Osimiri Mekong na-asọba n'Osimiri China.
N’oge ọkọchị gara aga, m mechara gafee mmiri Mekong; ihe nke masiri m nke ukwuu ruo ogologo oge. Ọ dị ka ịrịgo na akpụrụ akpụ nke nnwere onwe na New York, ịgagharị Seine na Paris ma ọ bụ lee Big Ben en London.
Nke a na-akpali akpali ije site na Mekong mere n'oge njem na Luang Prabang, (Laos), bụ obodo na-enweghị atụ, nke na-eme ndagwurugwu mara mma n'etiti Osimiri Mekong na Osimiri Khan. N'agbanyeghị oke mmiri ozuzo na-ezo ụbọchị ahụ, ọdịdị ala ahụ enweghị atụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ndụ. Amaja m kwuo, mmiri ozuzo ahụ mere ka ọnọdụ ahụ dịkwuo mma ka ọ mere ka ọ bụrụ ihe dị adị ma na-atọ ụtọ. Tụkwasị na nke ahụ, a kwadebere ụgbọ mmiri ndị ahụ n'elu ụlọ, iji chebe onwe ha pụọ ​​na mmiri ozuzo, ihe ha maara nke ọma na nke ha ji ụgwọ na ahịhịa ndụ ha mara mma.
Tripsgbọ njem ụgbọ mmiri na-enye gị ohere ịnụ ụtọ obodo ma ọ bụ obodo nta ndị dị n'akụkụ osimiri site n'ụzọ ọzọ na ịdị jụụ nke ntamu na ịghagharị mmiri na-eweta.
Echefula igwefoto ma nwee obi ụtọ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Laos » Osimiri Mekong gafere: Tibet, China, Burma, Thailand, Laos, Cambodia na Vietnam
Cambridge, otu n’ime obodo kachasị mma na UK